အချိုရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်အချိုရည်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စက်ရုံ
Jam Paste & Syrup လိုင်း
Crusher နှင့် Juicer
လှီးဖြတ်ခြင်းနှင့် အခွံခွာခြင်း သန့်ရှင်းရေး
Filling Sealing & (Un) Packing
Sterilizing & Forming ရောစပ်ခြင်း။
အမြန်အစားအစာသေတ္တာထုပ်ပိုးစက် အလိုအလျောက်နိုက်ထရိုဂျင် F...
တစ်ခါသုံးလက်အိတ်ထုပ်ပိုးစက် TPE လက်အိတ်ခေါက်...
ပိုးသတ်ဆေးဖြည့်စက် တစ်ခေါင်းလုံးနှင့် နှစ်ထပ်ခေါင်း...
Washer စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Tinplate Can...
သန့်စင်ခြင်းနှင့် လေအခြောက်ခံခြင်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို အပူနှင့်...
1000L-13000L Full Automatic UHT Tubular Sterilizer W...
အမဲခြောက်ခြောက်တန်သော ပရောဂျက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော B...
Cake Packing Filling Sealing Machines နှင့် Product တစ်ခုလုံး...
ဟိုက်ဒရောလစ် အလိုအလျောက် ခွက်လုပ်သည့် စက် အပြည့် ဆာဗို...
အလိုအလျောက် Multihead Double Head ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် Fr...
နှစ်ထပ်ဦးခေါင်း အသေးစား ထုပ်ပိုးမှု ဖြည့်စက် အလိုအလျောက်...
အလိုအလျောက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးစက် မြန်နှုန်းမြင့် ဖုန်စုပ်စက်...
ဂျယ်လီဆော့စ် အဖြည့်နှင့် အလုံပိတ်စက် CFB-4A F...
Gas Electric Sauce Food Cooking Mixer စက် Cookin...
အလိုအလျောက် မြန်နှုန်းမြင့် ဖုန်စုပ်စက် အပြည့်...
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Semi-automatic ဖုန်စုပ်ပိတ်စက်...
စိတ်ကြိုက်လက်ရာ ဘီယာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အကောင်းစား ဘီယာချက်လုပ်သည့် စက်ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် 1. ဤအစီအစဥ်သည် ဂျာမန်စတိုင်အသစ် saccharification နှစ်အိုးသုံးအိုး 500L စနစ်၊ ရေနွေးငွေ့အပူပေးခြင်း၊ အသိဉာဏ်တူတူရိယာထိန်းချုပ်မှု၊6500L စော်ဖောက်ခြင်းကန်၊ 50L မိုဘိုင်း CIP သန့်ရှင်းရေးစနစ်၊ နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် စော်ဖောက်ထားသော ကန်များကို ထည့်သွင်းနိုင်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် ချဲ့ထွင်နိုင်သည်။2. ဤကိရိယာအစုံသည် မြေသားရေစိုခံခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းကုသမှု လိုအပ်ပါသည်။ရေဆင်းမြောင်းသည် ဘီယာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခန်း၏ လည်ပတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရန် မျှော်လင့်သည်- မြေသားရေစိုခံခြင်း၊ ရေဆင်း...
သရက်သီး/နာနတ်သီး/ပန်းသီး/လိမ္မော်ဖျော်ရည် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့်လိုင်း/ သစ်သီးဖျော်ရည် ဖြည့်တင်းမှုလိုင်း
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် သက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်း- ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာစက်ရုံ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာဆိုင်များ အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်: JPF-GA0980 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်မှု လိုင်းဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 3kw အလေးချိန်-6တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1380*1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001,CE အာမခံချက်- 1 နှစ်ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- ကွင်းဆင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှု၊ အင်ဂျင်နီယာ...
Date Syrup Paste Juice Processing Line
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-ZJ8980 အမျိုးအစား- ရက်စွဲများ ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ဗို့အား- 380V ပါဝါ- 1.5kw အလေးချိန်: 600kg အတိုင်းအတာ(L*W*H): 1720* 1160*1280mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO အာမခံချက်- တစ်နှစ်တာရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည်- ရက်စွဲ-ရည်/paste/juice processing line နောက်ဆုံးထွက်ကုန်များ- နေ့စွဲ ရည်/ငါးပိ jui...
သစ်သီးဖျော်ရည်သည် လတ်ဆတ်သော သစ်သီးဖျော်ရည်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။အသီးအနှံအမျိုးမျိုးရဲ့ဖျော်ရည်မှာ ဗီတာမင်အမျိုးမျိုးနဲ့ တခြားအာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အချိုရည်အဖြစ် မှတ်ယူကြပါတယ်။သို့သော်၊ အသီးအနှံများတွင် အမျှင်ဓာတ်နှင့် သကြားပါဝင်မှု မြင့်မားခြင်း မရှိခြင်းကို ၎င်း၏ အားနည်းချက်များအဖြစ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် မှတ်ယူကြသည်။
ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာနှင့် ဆိုဒါအချိုရည် ထုတ်လုပ်ရေးစက်
ကာဗွန်နိတ်အဖျော်ယမကာနှင့် ဆိုဒါအဖျော်ယမကာ ထုတ်လုပ်ရေးစက် ဆိုသည်မှာ အချို့သောအခြေအနေများတွင် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ပါ၀င်သော အဖျော်ယမကာကို ရည်ညွှန်းသည်။
သန့်စင်သောရေထုတ်လုပ်သည့်စက် စီးဆင်းမှု- ရေစိမ်း → ရေလှောင်ကန် → မြှင့်တင်ပေးသည့် ပန့် → ဂွမ်ဇန့်သဲစစ်ထုတ်ခြင်း → အသက်ဝင်သော ကာဗွန်စစ်ထုတ်ခြင်း → အိုင်းယွန်းအဆိပ်သင့် → တိကျသော စစ်ထုတ်ခြင်း → ပြောင်းပြန် osmosis → အိုဇုန်းပိုးသတ်ဆေး → သန့်စင်သောရေစည် → သန့်စင်သောရေစုပ်စက် → ပုလင်းလျှော်ခြင်း၊ ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်း လိုင်းဖြည့်ခြင်း → ပို့ဆောင်ခြင်း → မီးခွက်
ဒိန်ချဉ်သည် ချိုချဉ်အရသာရှိသော နို့တစ်မျိုးဖြစ်သည်။၎င်းသည် နွားနို့ကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ယူ၍ ပျားရည်နှင့် နို့ထဲသို့ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယား (အစပြုသူ) ဖြင့် ပေါင်းထည့်သည့် နို့ထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
ကိုယ်တိုင်ချက်ပြီး လတ်ဆတ်သော ဘီယာ ကိရိယာ
ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော လတ်ဆတ်သော ဘီယာကိရိယာ ဆိုသည်မှာ ဘီယာထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာကို ရည်ညွှန်းပြီး လတ်ဆတ်သော ဘီယာကိရိယာများ၊ မိုက်ခရိုဘီယာ ကိရိယာများနှင့် ဘီယာအသေးစား ကိရိယာများ ဟူ၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။ကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်ထားသော လတ်ဆတ်သောဘီယာပစ္စည်းများသည် ဟိုတယ်များ၊ ဘားများ၊ အသားကင်များ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စား ဘီယာချက်စက်ရုံများအတွက် အဓိကအားဖြင့် သင့်လျော်ပါသည်။
အလိုအလျောက် သစ်သီးဖျော်ရည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အပြည့်အစုံ
ဤမျဉ်းသည် သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ မာလကာ အစရှိသော အပူပိုင်းအသီးအနှံများကို ပြုပြင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည်။၎င်းသည် ကြည်လင်သောဖျော်ရည်၊ အစိမ်းရည်၊ ဖျော်ရည်နှင့် ယိုတို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ဤလိုင်းတွင် ပူဖောင်းသန့်ရှင်းရေးစက်၊ လွှင့်ထူစက်၊ ရွေးချယ်ရေးစက်၊ စုတ်တံသန့်ရှင်းရေးစက်၊ ဖြတ်တောက်သည့်စက် စသည်ဖြင့် ပါဝင်သည်။
အော်ဂဲနစ် Apple Juice အာရုံစူးစိုက်မှုပြုလုပ်သည့်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-APM009 အမျိုးအစား- ပန်းသီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်သည့်စက် ဗို့အား- 380V/50HZ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- CE/ISO9001 အာမခံချက်- 12လ၊ 12လ ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးနောက် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော စက်ယန္တရား အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည် : ပန်းသီးဖျော်ရည်ပြုလုပ်သည့်စက် အမည် : ပန်းသီးဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း လျှောက်လွှာအပြည့်အစုံ : သစ်သီးဖျော်ရည်စက်ရုံ Item : ပန်းသီးဖျော်ရည်...
အပူပိုင်းဒေသ Passion သစ်သီးဖျော်ရည်လုပ်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူရင်းနေရာ- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- JUMPFRUTIS အမျိုးအစား- စိတ်အားထက်သန်မှု ဖျော်ရည်ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း ဗို့အား- 220V/380V ပါဝါ- 2.2kw အလေးချိန်- 6tons Dimension(L*W*H): 1170x560x1260mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: CE ISO Warranty: 1 Years, 1 Years After-sales Service Provided: Engineers available to service machinery overseas Product name: passion fruit juice machine Material: Stainless Steel 304 Application: kernel...
စိတ်ကြိုက်မာလကာဖျော်ရည်လုပ်စက် / မုန်လာဥနီဖျော်ရည် / ငှက်ပျောသီးဖျော်ရည်စက်
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အခြေအနေ- မူလနေရာအသစ်- ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM/JUMPFRUITS မော်ဒယ်နံပါတ်- JPF-GZ4865 အမျိုးအစား- စီမံဆောင်ရွက်မှု လိုင်းဗို့အား: 220V/380V ပါဝါ: 3kw အလေးချိန်: 60 တန် အတိုင်းအတာ(L*W*H)။ 1380*1200*2000mm အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ISO 9001,CE အာမခံချက်- 1 Year After-sales Service Provided- နိုင်ငံခြားတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် စက်ယန္တရားများအတွက် ရရှိနိုင်သော အင်ဂျင်နီယာများ ကုန်ပစ္စည်းအမည်- Guava Juice Making Machine / Carrot Juicer / Banana Juice Machinery Materi...
123456နောက်တစ်ခု >>> စာမျက်နှာ ၁/၈
အဆောက်အဦ 3၊ အမှတ် 1558၊ Pingzhuang East Road၊ Lingang New Area၊ China (Shanghai) ရှေ့ပြေးလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဇုန်
© မူပိုင်ခွင့် - 2010-2020 : All Rights Reserved. - , , , , , ,